गैंडाको पिसाब चोरि गर्ने गार्डको जागिर चट ! :: NepalPlus
गैंडाको पिसाब चोरि गर्ने गार्डको जागिर चट !
नेपाल प्लस२०७७ फागुन १४ गते १४:५८
राजन चौधरीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा खिचेको यो फोटो सांकेतिक हो ।
दिल्लीस्थित चिडियाखानाका एक गार्ड (सुरक्षारक्षक) ले गैंडाको पिसाब चोरी गरेपछि कारवाहिमा परे । तर किन चोरे गैंडाको पिसाब भन्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मेडियाको ध्यानसमेत तान्यो । दिल्लीस्थित चिडियाखानाका कर्मचारीले त्यहाँको गैंडाको पिसाब चोरि गरेका थिए । त्यसपछि गैंडाको पिसाब चोरी काण्डमा उनलाई जागिरबाट निकाला गरियो ।
त्यहाँका अधिकारीले एक गार्डले अर्को गार्डलाई गैंडाको पिसाब दिँदै गरेको भेट्टाए । ‘सरी गार्डजी पिसाब चोरी भारतमे बन्देज है ।’ उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो ।
गैंडाकै पिसाब किन ?
भारतमा गैंडाको पिसाबलाई औषधीका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । नेपाल, भारत, वंगलादेश आदि दक्षिण एशियाली अन्य देशमापनि गैंडाको पिसाब औषधीका रुपमा प्रयोग गर्छन् । गैंडाको पिसावमा एफ्रोडाईसियक भन्ने तत्वहरु मिसिएको गुण हुन्छ । त्यसले दम, रुखाखोकि, टाउको दुखेको, दम लगायत अनय केहि दिर्घरोगीलाई सन्चो पार्छ भन्ने विस्वाश छ । यस्तो विश्वास चिनियाहरुमापनि छ ।
गैंडाको पिसाब चोरीमा मेडियाको मुख प्रिष्ठ ढाकेको योनै पहिलो पटक भने होइन । सन् २००१ मापनि कोलकातास्थित चिडियाखानामा गैंडाको पिसाव तस्करी गरिएको भन्दै समाचार बाहिरिएको थियो । त्यहाँको चिडियाखानाका गार्डहरुले गैंडाको पिसाब प्रति बोतल २५० भारुमा बिक्रि गर्ने गरेको सार्वजनिक गरिएको थियो । चिडियाखानामा काम गर्नेहरुसित साँठगाँठ गरेर स्थानियले गैंडाको पिसाब लुकिचोरी किन्ने गरेको बताइएको छ ।
एशियाली एक सिंगे गैंडाको पिसाबमा अनेक खाले वासना हुन्छन् । बिभिन्न तत्वले मिश्रित हुन्छ । गैंडाले आफ्नो पिसाव आफ्ना प्रतिद्वन्धीलाई जनाउ दिन, पोथीलाई आफ्नो जानकारि, उपस्थितिको जानकारि दिन प्रयोग गर्छन् । आफू कुन बाटो हिँडेको, कहाँ छु भन्ने जानकारि दिनपनि पिसाब छर्ने गर्छन् । आफ्नो बासस्थानको घेरो तोक्न वा जनाउ दिनपनि पिसाब तुर्क्याउने गर्छन् । एउटा गैंडाको पिसबमा उसको परिचय लुकेको हुन्छ । गैंडाले आफ्नो पिसाबको धारा तिन देखि चार मिटरसम्म बत्ताएर फाल्न सक्छ ।